USA Tafura Tennis uye Blossom Hotel Houston Zvino Joinha Mauto
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » USA Tafura Tennis uye Blossom Hotel Houston Zvino Joinha Mauto
Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • misangano • nhau • Sports • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
USA Tafura Tennis (USATT) neBlossom Holding Group nhasi vazivisa kuti Blossom Hotel Houston yakatumidzwa kunzi Official Hotel yeUSATT. Pasi pechibvumirano, yunifomu yeU.S. National Table Tennis Team icharatidza logo yeBlossom Hotel Houston, hotera yakasarudzika yepamusoro-soro iri mudhorobha reHouston.
Blossom Hotel Houston iri kutarisira kupa USA Tafura Tennis vatambi uye mafeni yakasarudzika uye ndeyechokwadi Houston yekugamuchira vaeni chiitiko.
Iri mukati memakiromita ekufamba kwenzvimbo inozivikanwa yemuseum uye yakakomberedzwa nenzvimbo dzekutenga, dzekudyira uye dzevaraidzo.
Blossom Hotel Houston inogona kunyatso kuzivikanwa nekudzosera munharaunda yeHouston.
“Tinofara zvikuru kutambirwa Blossom Hotel Houston mumhuri yeUSATT, ”akadaro Chief Executive Officer Virginia Sung. “Haisi hotera chete inzvimbo yakanaka, yepamusoro-soro ine zvinhu zvinoyevedza zvekugadzira, asiwo boka revaridzi rakaratidza kuzvipira mukuvandudza mamiriro ezvinhu evanhu vanogara munharaunda yeHouston. Chikwata cheNational US chodada kupfeka logo yeBlossom pazviitiko zvedu zvese zviri pamutemo. ”
"Iropafadzo yedu huru kudyidzana neU.SA Tafura Tennis uye kupa rutsigiro uye kuzivikanwa kune vatambi vane mukurumbira muchikwata cheUS National Tafura Tennis," akadaro CEO weBlossom Houston Hotel, Charlie Wang. "Sehotera nyowani yemhando yepamusoro yeHouston, tinotarisira kupa vatambi nevateveri veU.S.Tafura Tennis chiitiko chakanakisa chekugamuchira vaeni kuHouston."
Muvakidzani wepasirese-anozivikanwa Texas Medical Center mudhorobha Houston, iyo Blossom Hotel iri mukati memakiromita ekufamba enzvimbo inozivikanwa yemuseum uye yakakomberedzwa nenzvimbo dzekutenga, dzekudyira uye dzevaraidzo. Inoenderana nezita remadunhurirwa reHouston seSpace Guta, iyo Blossom inoratidzira yemwedzi-yakafemerwa minimalist dhizaini maficha. Iine 267 dzimba dzevashanyi dzepamusoro, iyo yegumi nenhanhatu-nhanho nzvimbo yepamusoro inopa anopfuura 9000 tsoka yenzvimbo inochinja musangano uye nzvimbo-ye-iyo-art Peloton® fitness centre. Blossom inobviswa nedenga remba padenga uye imba yekutandarira inopa yakajeka maonero eguta reHouston.
Mukutanga kwayo kuvapo, Blossom Hotel Houston inogona kunyatso kuzivikanwa nekudzosera munharaunda yeHouston. Pamusoro pekupa mabasa kuvagari vemuno vane mabasa anodarika zana nemakumi mashanu anopiwa panguva yekukwira kwedenda, muridzi weBlossom akapawo zviwanikwa nehunyanzvi kubatsira vanhu vanoshaya panguva yedutu rechando richikuvadza muTexas, semuridzi Charlie Wang's kambani yekuvaka yakagadzirisa kukuvara kwakakonzerwa nekuputika kwemapaipi emvura kwemhuri dzinopfuura zana nemakumi maviri emuno.
Iyo Blossom Hotel logo inozoratidzwa paUS National Tafura Yunifomu yunifomu kutanga ipapo.
Volkswagen itsva yeFashoni neMitambo, Chinese Style
Canada inotangisa nyowani yakajairwa COVID-19 yekudzivirira yekufamba ...
Basa idzva rekudzivirira Pasi rakatangwa neNASA uye SpaceX
Basa reUnited States muUNWTO Itsva?
Russian Sputnik V yekudzivirira ikozvino yatenderwa kupinda muIsrael
Chekutanga 100% Yakagadzirwa Nedhijitari Helicopter yeRussia Inotora...
Jordani kuti iwanezve pre-denda rekushanya nekushanya ne...
Slovenia yakatanga kuve guta idzva rekushanya kwekushanya ...
Kubhururuka kwendege kuenda kuUSA kunokwira
New Cruise Call ku Historic Falmouth Port Jamaica...
WTTC: Saudi Arabia inobata iyo inotevera 22nd Global ...
Kambani yekuchaja ndege yeUK Chapman Freeborn inovhura nyowani ...
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Yakabvumidzwa Kune Vana...
LGBTQ + vatungamiriri vekushanya vanoungana muAtlanta kune 'mhuri ...
New Nazi Discoveries inoshandura nhoroondo paBritish Chakavanzika ...
IMEX America Vanopinda Vanovaka Yakakosha Clubhouse ye...
Turkish Airlines neBelavia hazvichabhururuka neIraqi...
WestJet inodoma Executive VP mutsva uye Chief Kuvimbika ...
Seychelles Inoshamisira Nyanzvi dzekufamba Kubva kuSpain
Jazeera Airways inozvipira kune makumi maviri nemasere majeti eA28neo matsva
Cebu Pacific vashandi vanobhururuka zvino 100% vabayiwa zvizere
Mutungamiriri weFrance akavharirwa ari ega mushure mekuongororwa ...
Impact paHunhu: FII Institute
Apple inomisa kutengesa kutsva kweTurkey semari yeTurkey ...
Vols from Milan to Rovaniemi on easyJet now
Vakuru vemaindasitiri ekufambisa vanoramba vakazvipira ku...